> Resource > Ladnaansho > ceeriin Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Photos ceeriin ka Camera Digital
Sida loo soo ceshano Images ceeriin ka My Camera Digital?
Hi, si qalad ah waan formatted card Sandisk ee CF in aan Canon 5D2 camera digital. Waxaa jiray sawirada qaar ka mid ah cayriin ee kaarka. Ma suurtagal ii tahay inay iyaga soo ceshano? Waxaan rajeynayaa in qof ii talin karaa qaar ka mid ah qalab ama barnaamijyo si loo soo celiyo images cayriin ka card CF aan. Best xiriira.
Waa arrin masiibo haddii aad la tirtiro ama formatted images cayriin aad camera digital aan iyaga wareejiyo si aad u computer. Laakiin halkan runta ku saabsan sanamyada cayriin badiyay camera aad: waxay waxaa lagu calaamadeeyay xogta iyo Reebnaan yaa ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Tani waxay suurtogal ah in aad ka bogsato photos cayriin ka camera digital.
Waad joojin kartaa adiga oo isticmaaleya isticmaale camera digital iyo raadiyo barnaamij soo kabashada sawir sida xawliga ah u caawimaad degdeg ah. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac noqon kartaa doorashada ugu fiican ee aad u soo celin images cayriin ka camera digital, iyadoo aan loo eegayn images ceeriin ah waxaa laga badiyay sababta oo ah tirtirka, formatting, nidaamka ama xataa weerar virus baadi. Iyada oo ay interface fududahay in la isticmaalo iyo ammaan, ayaad ugu soo kaban karto sawiro cayriin ka dhowaad dhammaan noocyada camera digital, oo ay ku jiraan Canon (CR2, CRW), Sony (ARW, SRF, SR2), Kodak (DCR, K25, KDC), Nikon (NEF), Panasonic (RW2), Fuji (RAF) iyo ka badan.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka ah si ay u bilaabaan camera digital kabashada sawir cayriin hadda!
Kabsado Photos ceeriin ka Camera Digital in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Si aad u soo kabsado dhan images cayriin laga badiyay ka camera digital, fadlan joojiso isticmaalka qalab aad si looga fogaado in xogta overwritten iyo aad u hubiso in camera digital ama kaadhka xusuusta ay u aqoonsan karaan computer.
Haddaba fuliyaan camera digital kabashada sawir cayriin la Wondershare Data Recovery for Windows.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada si loo soo celiyo sawirrada aad camera digital ah
Connect aad camera digital ama ay xasuusta la your computer iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery barnaamijka, oo aad arki doonaa interface barnaamijka bilowga soo socda.
Si aad u soo kabsado lumay, tirtiray, formatted ama kharribeen images cayriin, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 baarista camera digital ama xusuusta raadiyo images cayriin lumay
Halkan kaliya u baahan tahay in aad si aad u dooratid camera digital ama xusuusta oo guji "Start" button furmo si ha raadinta barnaamijka for images ceeriin waxay ku.
Haddii images cayriin ayaa formatted ka camera digital, waxa kale oo aad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho photos cayriin ka camera digital
Ka dib markii iskaanka, oo dhan photos cayriin helay on camera aad lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka" category uu furmo. Waxaad ku eegaan karo oo dhan images cayriin si aad u hubiso in aad sawiro laga badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid kuwa images cayriin aad ku socoto ay dib u hanato oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, goobta wax on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii sanamyada cayriin kabsaday si aad camera digital si degdeg ah ka dib markii dib u soo kabashada.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows XP
Top 20 macruufka Transfer 9 Data Tools: Data Transfer u dhaxaysa macruufka iyo Android Devices
Sida loo xaliyo dhibaatada "miiska xijaab aan waxba ka jirin"
Sida loo soo celiya Khasaaray Drive Logical